Liyini inani lesevisi ye-Airbnb? - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Izindleko – isihloko sosizo
Liyini inani lesevisi ye-Airbnb?
Linqunywa kanjani inani lokubhukha kwami?
Ingqikithi yenani lokubhukha lisekelwe esilinganisweni sobusuku esibekwe umbungazi, kanye nokunezelwa kwamanye amanani nezindleko ezinqunywe…
Menenja amasethingi enani lakho
Hlela indlu yakho ukuze umenenje inani lakho lobusuku, izaphulelo, nokunye.
Amasethingi enani eliqokiwe akuthinta kanjani ukunikeza umnikazi wendlu imali yakhe?
Amanani aqokiwe eviki nawenyanga azongena esikhundleni samanani akho avamile obusuku, eviki, nawenyanga, kanye nanoma imaphi amanani obusuku…